Egwuregwu Mmụta Ahụike na Egwuregwu Antwerp - Gaa! ECTlọ akwụkwọ
ụdịdị dị iche iche na-eme egwuregwu
MGBE AHỤ NA-ECHICHE! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Sport > Mmụta Ahụike na Egwuregwu
Ọzụzụ Ọmụmụ Ihe + (TSO) nke Gaa! Ụlọ akwụkwọ sayensị, campus Ruggeveld
De Ndị na-egwu egwuregwu soro ezumike egwuregwu oge zuru ezu Education & Physical Education (TSO). Ọzụzụ a na-ahụ anya na nke anụ ahụ abụghị ọkachamara n'otu alaka ụlọ ọrụ egwuregwu, mana ị na-eme ka ị gaa egwuregwu dị iche iche (egwuregwu, egwuregwu bọl, ntụrụndụ, igwu ...). A na - atụlekwa ọzụzụ, nkwado ọnọdụ, nkwupụta na nchebe onwe onye. Na mgbakwunye na isiokwu ndị n'ozuzu, ị ga-enweta usoro ọmụmụ akọwapụtara. Enwere njem na mba ọzọ na imekọ ihe ọnụ na ndị otu si mpaghara egwuregwu.
Na nke a ọzụzụ siri ike ị bụ 13 nọ n'ọrụ oge nkuzi 16. Ihe a na-elekwasị anya na egwuregwu nka na ụzụ, ma a na-akwụ ụgwọ nlezianya nke njem, omenala nke ntụrụndụ, egwuregwu dị mma, nkwado, ọrụ, ịnakwere iwu, ụkpụrụ na ụkpụrụ. Ị na-ekere òkè na asọmpi, asọmpi na egwú egwu. Ị na-aga ma hazie ụbọchị egwuregwu. Enwere njem na mba ọzọ dịka ịgba ọsọ, ịkwa ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, wdg.
Ị nwere ike ugbua na Ngozi 1e malite na otu agụmakwụkwọ gara aga. Chọpụta ihe ọzọ site na Egwuregwu 1e nke egwuregwu (Oge egwuregwu, egwuregwu A-iyi)
Ị nwere ike ịmalite ọrụ LO & Sport mgbe ọ bụla nhọrọ n'afọ nke abụọ. Ị ghaghị inwe ahụrụ dị mma maka ọzụzụ dị iche iche ma mee ka ị gbalịa imekwu mgbalị maka ọzụzụ ebe ị na-erughị talent ma ọ bụ mmasị.
Nkwadebe kachasị mma bụ Egwuregwu 1e nke egwuregwu.
"Na-aga! Enwere m akwụkwọ nduzi na nduzi ọ bụla. Ihe ndị na-adịghị ike m rụsiri ọrụ ike ka m nwee ike ịga nke ọma ma gụchaa ya. N'ihi ntọala siri ike nke m nwetara, enweghị m nsogbu na mahadum. Dị ka onye nkuzi na-akụzi ihe, m na-etinyekwa nke a na ụmụ akwụkwọ m taa. "
"Dịka ọmụmaatụ, na mgbakwunye na nkuzi, anyị na-agakwa sọfụ na France. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, m na-enweta ọtụtụ ahụmahụ. "
Mgbe nhazi 3e Le & Sports ị nweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị. Omume a na-enye gị ntọala siri ike ịmalite ọmụmụ ihe dị elu n'ime ọzụzụ. E nwere ọtụtụ ọrụ; ndị agha, ndị uweojii, ndị agha, onye nnapụta, onye nkụzi LO, onye nlekọta ahụike, nọọsụ, .. Ihe omume maka ịmalite ọmụmụ ihe na ohere ọrụ mgbe ọzụzụ a gasịrị ebe a.
Gaa ebe a nkuzi nke TSO ọzụzụ LO & Sport:
Afọ 3e nke na-erughị ala (39KB, .pdf)
Afọ 5e nke na-erughị ala (39KB, .pdf)
Afọ 6e nke na-erughị ala (39KB, .pdf)